“Waxaan u mahad celinayaa Benzema waayo isagaa u sabab ah inaan ku biiro Man United.”. – Gool FM
“Waxaan u mahad celinayaa Benzema waayo isagaa u sabab ah inaan ku biiro Man United.”.
Byare November 13, 2017
(Europe) 13 Nof 2017. Michael Owen ayaa shaaca ka qaaday inay Man United la soo saxiixatay oo kaliya markii ay ku guul darreysteen inay gacanta ku soo dhigaan Karim Benzema oo kolkaa ka tirsanaa Lyon.
Xilli ciyaareedkii 2009, dhaliyihii hore ee Liverpool ayaa si lama filaan ah ugu soo dhaqaaqay Old Trafford, laakiin marna ma aysan dhici lahayn haddii uu Sir Alex Ferguson heli lahaa Benzema oo bartilmaameedkiisa koowaad ahaa kaa oo markii dambe ku biiray Real Madrid.
Los Blancos ayay ku qaadatay inay dhaliyaha reer France ku soo xero galiyaan adduun dhan 35 milyan oo euro, laacibka ayaana ku sugan Bernabeu tan iyo waagaa.
Owen ayaa qiray in taariikhdaasi si kale loo qori lahaa haddii uu Ferguson heli lahaa sida uu doonayay.
“Waxaan u mahad celinayaa Benzema waayo la’aantiisa marna kuma biireen Manchester United,” Owen ayaa sidaa u sheegay Canal + .
“Ferguson wuxuu ii sheegay inuu ila soo saxiixan doono oo kaliya haddii ay waayaan Benzema, taas ayaana dhacday.”.
Imise dal ayaa u soo baxay Koobka adduunka imise ayaana harsan???